Ukukhethwa kunye Nendima ye-Opposition Official Canada
Umsebenzi obalulekileyo oqinisa iNdemokhrasi yaseCanada
KwiCanada, "inkcaso yegosa" yinkampani yezopolitiko kunye neyesibini ephakamileyo kwiindawo zeNdlu yeeNgingqi okanye idibano yomthetho. Eyaziwa ngokuba nguNyana wobuKhosi oManyeneyo, abameleli beqela lezopolitiko baxhasa uluntu ngokugxeka iziphakamiso kunye nezenzo zeqela.
Iqela liba njani liPhathiswa eliMthethweni
IKhanada ineqela lamapolitiki amaninzi.
Emva kokhetho, inkokeli yeqela lezopolitiko enezona zihlalo ezininzi kwiNdlu yeNdlu ye-Commons iyamenywa ngu-rhu lumente jikelele ukuba enze urhulumente. Emva kokumiselwa ngu-rhu lumente-jikelele, inkokeli yale nkampani iba yintloko-nkulu. Inkulumbuso ikhetha abaphathiswa kunye neefom zeKhabinethi .
Amanye amaqela angenawo amandla ayaziwa njengamaqela aphikisayo. Iqela eliphikisayo kunye namalungu amaninzi eNdlu yee-Commons yi-opposition.
Ngokomzekelo, ngaphantsi kweli nkqubo, ukuba iqela lamalungu okhetho lwakutshanje luyiQumrhu leLiberal, ngoko-nkulumbuso kunye nabaninzi bamameli kwiNdlu ye-Commons babe ngamalungu eBhodi yeLiberal. Ukuba iqela le-Conservative lafumana inani eliphakamileyo lesibini kwivoti kunyaka lonyulo lwangoku, ngoko ke ii-Conservatives ziza kubangela ukuchaswa ngokusemthethweni. Amanye amaqela athola ipesenteji ezingaphantsi kwamavoti, njenge-New Democratic Party, aya kubandakanya ezinye iinkcaso.
Indima yoPhikiswano loLuntu kuRhulumente
Ngaphantsi kwenkqubo yepalamente yaseCanada, umsebenzi oyintloko weenkcaso ukuchasa urhulumente ngosuku ngalunye. Kule ngongoma, inkcaso ithatha inxaxheba ekuchaseni, ukugxeka umthetho wezenzo nezenzo, kunye nokubonelela uluntu ngemigaqo-nkqubo kunye neziphakamiso.
Kwezinye iimeko, inkcaso inokuzama ukuhlawula urhulumente ngokuvota malunga neziphakamiso zikaRhulumente, ezifana nebhajethi yonyaka.
Inkcaso yegosa iphinda igcine "isithunzi iKhabhinethi" ukugxeka izenzo zeeKhabhinethi.
Ixabiso leCandelo eliPhathelene neNtando yeninzi yaseKhanada
Ubukho beenkcaso kubaluleke kakhulu ekusebenzeni kwenkqubo yezopolitiko, njengaseKhanada. Ngokweengcamango, ukuchaswa ngokusemthethweni kusetyenziswa "isheke" kumandla kunye nokulawula urhulumente. Le nkqubo yokuchasana nezopolitiko isekela intando yesininzi enempilo kwaye idalwe kwaye idala ukuthembela kubanini ukuba bakwazi ukulungisa ingxaki ngeendlela zokuthula. Ubukho beenkcaso busekelwe kwingcamango yokuba incinci iyamkela ilungelo labaninzi ukwenza izigqibo, ngokungakhathaliseki ukuba ihloniphekile ilungelo lencinci ukuba lingavumelani nesininzi kwaye iphakamise izisombululo zayo.
Iinzuzo Zokuba Ngummeli Osemthethweni
Iqela eliphikisayo lenkcubeko lifumana iingeniso ezingcono zezemali, njengemali yophando, kunye neenzuzo ezinxulumene namanye amaqela aphikisayo. URhulumente unikezela inkokheli yeqela eliphikisayo likarhulumente yokuhlala, ebizwa ngokuba yi-Stornoway kwaye ikhona e- Ottawa .
Ziziphi iilwimi ezisemthethweni zaseKhanada?
IiAkhawunti zeBhanki ezingabhalwanga eCanada
IiNkcazelo ezibalulekileyo malunga namaPhondo aseKhanada nakwiindawo
I-Harappa: IXeko-dolophu yase-Ancient Indus Impucuko
Iifayile zokusebenzela ezilula
Ukukhulula Kwamantombazana Eminyaka eyi-130 Uphendule Imibuzo Yakho Yomlilo
IJob Bush Jokes
Amagama amahle kakhulu okuwasebenzisa
Ukudibanisa kunye neSigqeba sokuLoba okanye isiThuthi esiPhezulu
Adowling College Admissions
UkuHlola okuNdawo kuHlapha apha emhlabeni
'Iintsuku ezili-1000' ngeHoy Hosseini - Imibuzo Yemibuzo
Range Rule for Deviation Standard